Ilamanisile incoyincoyi - Ilanga News
Home Izindaba Ilamanisile incoyincoyi
UKAMABASO ehola umnakwabo uMaSibiya beyofaka izindandatho kumyeni wabo, iNkosi Vukile “Ncoyincoyi” Shembe. IZITHOMBE ngu: JOHN HLONGWA
ISHADELWE ikakwe ngabakwasi-dlodlo iNkosi yamaNazaretha ohlangothini lwaseKuphakameni, uVukile “Ncoyincoyi” Shembe, ebishadelwa ngamakhosikazi amabili, ukaMabaso noMaSibiya izolo ngeSonto, ekomkhulu lebandla eNanda.
AmaNazaretha abephume ngo-thi lwawo eyozibonela inkosi yawo ifaka izindandatho emakhosikazini ayo alama amanye amathathu, nawo agcagca ngosuku olulodwa.
Umgidi walo mshado uqale ligamenze ele-12 kwaze kwayoshaya elesithathu iNcoyincoyi ingakahla-nganiswa namakhosikazi ayo. Kuthe sekugamenxe elesithathu, lezwakala iphoyisa limemeza lithi: “Uyabuz’ umthetho ukuthi wena okaSibiya uyamthanda na uNdla-nzi.”
UMaSibiya usukume ngengoma ezoloza esigcawini, waze wayobeka isicephu phambi kwephoyisa elisicoshe lagiya liyosinika iNcoyinco-yi. Kulandele uKaMabaso wenza okufanayo.
Kuqedwe lapho kwasukuma umndeni wakwaSibiya, wavuma ilobolo, uchaza ukuthi iNcoyincoyi ibalobolele kahle, kwangasala ngisho indibilishi ngokunjalo no-mndeni wakwa-Mabaso wasukuma wabonga.
Kube sekucelwa ukuthi ibandla li-hlakazeke kusale imindeni emithathu owakwaSibiya, owakwaMabaso nowakwaShembe okuyiyona okuthiwe iyadingeka uma sekwabiwa.
Yize ILANGA beliwuthamele lo mshado, kodwa kubenzima ukuthola udaba oluphelele nje-ngoba abakhulumela ibandla bebe-ngafuni ukukhuluma lutho ngomshado, bethi besaba ukuthi sizoveza ukuthi beseqile isibalo esivumelekile esibekwe wuhulumeni nokuthi bonke bebengazifakile izifonyo.
Previous articlekubatshazwa unya kudutshulwa abesifazane
Next articleBEZIQHAKAZILE IZINTOMBI EMHLANGENI